National Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev ingenye izikhungo yodumo zemfundo ye-Ukraine. Emazinga lasetulu izikhungo ukunikeza ezingeni umsebenzi othisha inani elikhulu kubazalwane abaphothule owaziwa of the nyuvesi. Adume kakhulu inyuvesi, okuyinto has a okukhethekile lapha, futhi yini okufanele uyenze e National Aviation University (Kyïv)? Lokhu Kuzoxoxwa.
Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev: Umlando
Wasungula waseyunivesithi e-yalolucwaningo 30 ekhulwini elidlule leminyaka. Kulokhu, indaba iqala ukusungulwa zezindiza izifundo ihlelwe polytechnics ekhatsi Kiev ekhulwini le-19.
Ngemva isisekelo Institute ngo-1933, eminye washintsha igama eziningana izikhathi zalo. I semfundo ephakeme kwaba Institute of Civil Aviation, Civil Aviation Institute, International University of Aviation, National Aviation University.
Ngezinye izinkathi ezithile eyunivesithi eholwa omongameli abaqavile njengoGamaliyeli M. Golego noma Aksenova, abaye bedele okuningi umzamo e kudalwa eyinkimbinkimbi ikusasa izikhungo zemfundo ephakeme e-base impahla. Emahlombe abo unomsebenzi omkhulu emkhakheni umsebenzi yenhlangano, endaweni ucwaningo lwesayensi futhi kumiswa iqembu othisha. Kusukela ngo-2008, ngo-N. Kulik ubesebenza njengomshayeli li.
Iqaphela nomnikelo futhi umsebenzi Kiev Aviation University isimo futhi embulungeni yonke, umsebenzi ophawulekayo yesayensi nokuthuthukiswa kohlelo zemfundo ye-Ukraine, ngo-2000 bese-uMongameli leonid Kuchma wenza inyuvesi kazwelonke, okuyinto kuxhomeke kakhulu isimo salo.
Iziqu kanye nabafundi Nau
Nat. Aviation University (Kiev) kwaba nesigcawu umsebenzi ososayensi abaningi abadumile. Phakathi kwabo kufanele basho G. Pukhov, P. Lepikhina A. Zenkovskaya, V. Kasyanov, V. Astanina, Kozhevnikova, A. Penkov, A. noN Kukhtenko Borodachova. Waphothula izifundo zakhe eNyuvesi futhi abantu abaningi ababevelele. Ngakho, kufanele ishiwo izazi ezinjengo G. Maykopar futhi P. nazarenko, kanye uchwepheshe owaziwayo emkhakheni isikhala zezindiza - V brow, inhloko inkampani zezindiza "International Airlines" Ukraine Potemskom V et al.
Ngo-2005, izibalo wabonisa ukuthi esikoleni esiphakeme ngaleso sikhathi zazifunde abafundi abangaphezu kuka-35,000.
Kuze kube manje, i-National Aviation University ingenye izikhungo esinamandla kunazo lolu hlobo emhlabeni wonke. Inani labafundi sifike ebuningini ngamakhophi angaphezu kwezigidi ezingu-50, lapho cishe 1.2 ayizinkulungwane. Akhawunti for abezinye izizwe ababeza Bavela emazweni ahlukene angu-50.
INational Aviation University ngesikhathi ukhona zikhona izikole eziningana abalulekile zesayensi kanye Pedagogical, okuyothi nyuvesi ukuqhuba ukuqeqeshwa hhayi kuphela Ochwepheshe onjiniyela, kodwa futhi nokuba ngifundise ezomnotho abafundi, umthetho, ngesimiso semvelo, Ochwepheshe isitimela emkhakheni wesayensi yokuhlalisana kwabantu, kwengqondo yezilimi, njll .
Izinga eliphezulu of inqubo yemfundo kukhona umbono ezinhle amakhono ososayensi nabafundisi abasebenza Nau. Phakathi kwabo kukhona nanhlanu izifundiswa amalungu National Academy of Sciences of Ukraine, odokotela abangaphezu kuka-250 futhi osolwazi mayelana 900 PhD noma ilunga Uprofesa. imisebenzi Ukufundisa ngesikhathi Kiev National Aviation University futhi abasebenzi bazibandakanye of izindiza kanye nezinkampani ezimbonini. Othisha, kukhona nalabo abanomthwalo imiklomelo isimo emikhakheni ehlukahlukene.
Isakhiwo izitshela ukuthi 15 nezikhungo, 7 amakolishi kanye zobuciko, 2 izikole zemfundo ephakeme, izikhungo for Isikhala emoyeni umthetho, Centre Regional of Civil Aviation (amagatsha nezinhlangano zomhlaba).
Usayizi eziyinkimbinkimbi nohlolwe e 72 ehektheleni, amakhabethe ukuthi abafundi lidlula ngqo ukuqeqesha zitholakala endaweni izinkulungwane 140 m 2. Lapho belungela ukuya khona usebenzisa izindiza ezingaphezu kuka-70 nezindiza ezinophephela emhlane, izindiza injini mayelana 40, okukhulu kuna 200 izinhlelo ugibelile sekulingisa amabhentshi, 3 Flight simulators, amakhompyutha ecishe ibe yizinkulungwane 6.
Inani elikhulu abafundi unyaka ngamunye ungena National Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev. Ikhono kukhona ezihlukahlukene ekuniketeleni kucecesha hhayi kuphela kwezobunjiniyela kuphela kodwa nakwezinye lobuchwepheshe kanye humanities.
University zingahlukaniswa zibe izikhungo nanhlanu. Ukuqeqeshwa abafundi wenziwa ku Aerospace Institute, futhi i-Institute of zezindiza, emoyeni navigation, ulwazi kanye izinhlelo zokuxilonga, ukuvikeleka kwemvelo, Institute Humanitarian futhi Institute Wezangaphandle, Computer Technologies, Economics and Management, i-Institute of Law. Ngaphezu kwalokho, kunezinye amayunithi. Inyuvesi zihlanganisa isikhungo ukuthi ulungisa abafundi izincwadi, lwezimfundo ezithuthukile, kanye nabanye.
Ngo isakhiwo Nau ke eqala ubuhlakani elehlukile, abasebenzi bekwi abafundi angaphandle, futhi ekhethekile neminyango yezempi, futhi lokho ukuqeqesha abaphathi esiqiwini.
Eyunivesithi kukhona ehostela, lobeka Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev odlulayo isikolo, esiqeqesha ngebhajethi futhi uhlale isakhiwo inyuvesi.
ukuphila Student ngesikhathi Nau
Abafundi ungakwazi ukuzibandakanya emisebenzini yezemidlalo. Kukhona izigaba eziningi ezahlukene ukuthi ukunikeza izifundo ezingabizi abafundi baseyunivesithi for. Abafundi nethuba ukuyibhala nokujwayela eshibilikayo futhi ngomkhumbi, aeromodelling, scuba diving. Ngaphezu kwalokho, kukhona ingxenye Nau lombhoxo, handball, football nokunye. Abaningi babo bafunana matasa futhi bayaqhubeka bephethe endaweni Championships ehlonishwayo. Ikakhulukazi inyuvesi uyaziqhenya iqembu lombhoxo lama. Kuyinto izikhathi 13 iqhawe zase-USSR, kanye izikhathi 6 - iqhawe Ukraine. Rugby team eyunivesithi - isisekelo eqenjini lesizwe. Esikhathini Nau Ubuye yayo yacht club.
abafundi University ukuthatha ukuhlanganyela ngenkuthalo imikhosi ehlukahlukene, imincintiswano ye KVN, ukwenza umculo, nokunye. d.
Abathweswa iziqu National Aviation University angakwazi ukuthola umsebenzi kwelinye izinkampani yodumo kanye owaziwa ezisebenza ezweni nasemazweni aphesheya. Ngakho, le nyuvesi ukubambisana okuqhubekayo ngenombolo izinkampani, ezifana International Airlines Ukraine "Horse", ejensi travel American Travel Group, izinkampani "Aerosvit", Adidas, Coca-Cola, Beeline , nokuningi. et al.
College of Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev
Eyunivesithi usebenza, ikakhulukazi, ekolishi-computer emnothweni. Abafundi lesikhungo zingasebenzisa ezihlukahlukene emakilasini ifakwe, laboratories, isizukulwane samanje amakhompyutha, workshop kanye ne-computing system, iya ku-inthanethi ngqo kusayithi ukuqeqeshwa. Abafundi nethuba bazibonakalise kwezesayensi umsebenzi, khulula ukuzibandakanya kwezemidlalo nemibuthano kwezobuciko ngesisekelo ekolishi. Minyaka yonke abafundi engcono iqhaza imincintiswano futhi imincintiswano emazingeni ahlukahlukene.
Inombolo ephelele abafundi ekolishi computer nobuchwepheshe nakwezomnotho eNational Aviation University of ukufinyelela ezingaphezu kuka 1200. Izibalo kubonisa nokuthi izimo ezincintisanayo ekwamukeleni isabelomali kusho mncintiswano 1.5-2.5 abantu endaweni ngayinye, futhi nsuku inkontileka - 1 , 3 (zingahluka bacondze etindzaweni letehlukene kanye amakhono).
Ngemva kokuthweswa iziqu, abaphothula kungabuye afundiswe Aviation University futhi ukubhalisela mfushane iprogramme (kanye nezinye izikhungo zemfundo ephakeme). Nokho, leli lungelo isebenza kuphela labo neminyango eyofanelana etholwe ekolishi majors.
Ifonibhuku bese ukufundisa Imali
Minyaka yonke aphethwe usuku evulekile for labo abafuna ukuba ungenele National Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev. Ikheli lesikole - Avenue Cosmonaut . Komarova, inombolo d 1. Ungathola lapha ongaphansi komhlaba kusukela kuphi emzini.
Abafake izicelo kungaba uzijwayeze amanani asethwe Aviation Inyuvesi ekhatsi Kiev. Yesikole Imali kubafundi esigcwele simiswe ngalendlela lelandzelako: ku impohlo - ecishe ibe yizinkulungwane 19 USD ngonyaka, ochwepheshe - ayizinkulungwane 21 UAH, iziqu zeMasters - ayizinkulungwane 23 kubafundi zangaphandle intengo lihlukile .... Ngakho, Bachelor izobiza ayizinkulungwane 11 hryvnia, ungaba kuchwepheshe ukuze 12.500, Phathi - I-ayizinkulungwane 14 hryvnia ngonyaka zokutadisha.
Chelyabinsk College Yomthetho (CHYUK): incazelo, ikhethelo kanye nokubuyekeza
Okukhethekile "kwabantu": Humanities ukuqeqeshwa plus ulwazi mayelana nomphakathi
Ukuphepha Computer (okukhethekile): bani emsebenzini?
Amakhandlela Modern kusukela hemorrhoids olwisana ngempumelelo ngesifo ezingemnandi
Lasekuqaleni 3 D ikhadi. Izandla zakhe ekudaleni prezenty ajabulisayo
Stone charroit uzothola ambalwa indoda odinokimu
Kuhle ahlekisayo uchungechunge: iqoqo
Oleg Panov - owayeyilungu "Indlu-2". Umlando wakhe kanye nempilo yakho
Amadivaysi Homemade for router isandla. Funda indlela yokuqhuba router isandla
Saint Kitts Isiqhingi: nokuzwa nesithombe